GỊNỊ BỤ A 'imecha'?
A akpa n'olu imecha ekpebi size na ụdị mmechi chọrọ iji nweta a kwesịrị ekwesị akara. A akpa na ya kwekọrọ ekwekọ okpu ga nwere abịa risịrị. N'ihi na anyị na anyị ihe, anyị ga-enyocha abụọ ụdị dị iche iche nke risịrị na otú e si amata onye ọ bụla. The Glass nkwakọ Institute (GPI), a ahia mkpakọrịta na-anọchi anya North American iko akpa ụlọ ọrụ, ka etinye atumatu ka imaatu n'olu okokụre gafee ụlọ ọrụ.
Na-aga n'ihu Eriri -abbreviated "CT", na-aga n'ihu na eri closures na-ghọtara dị ka abụọ nọmba iche site na a backslash (ex. 38/400). The mbụ nọmba na-ezo aka dayameta nke a nyere mmechi, nke a na-tụrụ na millimeters. The abụọ nọmba, hụrụ mgbe backslash, na-ezo aka a akpan akpan imecha style.
Lug -also maara dị ka a "ighikota Off" imecha (abbreviated "T / O"), Lug risịrị na-na na hụrụ na iko containers. Lug risịrị ike mara dị ka ndị n'obosara (ie 38mm) sotere T / O (abbreviated maka ighikota-Off) -38mm T / O
N'èzí dayameta nke eri. The ndidi nso nke "T" akụkụ ga-ekpebi ma ọ bụ nwunye n'etiti kalama na mmechi.
The n'ime dayameta nke karama n'olu. Nkọwa achọ a kacha nta "m" na-ekwe ka nwechapụ n'ihi na ejuputa akpa. Linerless closures, na a nkwụnye ma ọ bụ ala akara, na ịkwadebe plọg na fitments achọ a na-achịkwa "m" akụkụ maka kwesịrị ekwesị ekwesị.
Tùa site n'elu nke imecha n'elu ọnu mbụ eri. The "S" akụkụ bụ isi ihe na-akpata na-ekpebi nghazi nke mmechi karama na ego nke eri engagements n'etiti kalama na okpu.
N'èzí n'obosara nke n'olu. The dị iche n'etiti "E" na "T" akụkụ kewara abụọ na-ekpebi na eri omimi.
The elu nke n'olu imecha. Hà site n'elu nke n'olu ruo n'ókè ebe n'obosara "T", akp ala, intersects n'ubu.